I-Apple kufuneka ivale kwakhona iVenkile yeApple eMichigan ngenxa yobhubhane | Ndisuka mac
Kungaphelanga nonyaka emva kokuba sihlaselwe lutshaba oluncinci kodwa olukhohlakeleyo esele lithathe abantu abangaphezulu kwezigidi ezithathu kwihlabathi liphela, imeko yobhubhane ibonakala ngathi iya isiba ngcono kancinci, kodwa sijamelana neengxaki rhoqo. Uqoqosho alunakho ukuphinda luvele njengoko kufanelekile kuba inqanaba losulelo lisephezulu kakhulu. Yiyo eyenzekileyo eMichigan kwaye ngenxa yeso sizathu iiApple Stores esixekweni kufuneka, kwakhona, vala ngokupheleleyo.
Nangona iApple ingeyiyo eyonanto ibethwa ngubhubhane kwinqanaba lezoqoqosho, ayisiyiyo eye yasindiswa ngokupheleleyo. IiVenkile zeApple kwihlabathi liphela zivaliwe ixesha elide ukuthintela ukusasazeka kweCoronavirus. Abambalwa babevula, abanye bevala, kubonakala ngathi ixesha alisoze lifike lokuba bavule bonke, ubuncinci kwilizwe elinye ngokupheleleyo. Kodwa Le yimeko ebisandula ukwenzeka e-UK. Nangona kunjalo, i-US ibonakala ingafikeleli kweli nqanaba. IMichigan kufuneka ivale kwakhona.
Iyonke zintandathu iingongoma zentengiso esixekweni ekufuneka zivaliwe kwakhona. Yimilinganiselo "yethutyana" ngenxa yeemeko ezikhoyo ze-COVID-19 kurhulumente. Inkqubo ye- Uluhlu lwevenkile yaseMichigan Qinisekisa ukuba zivaliwe kwikamva elibonakalayo, kungekho nto ibonisa ukuba ziya kuvulwa nini eluntwini. "Sithatha eli nyathelo ngononophelo olukhulu njengoko sijonga imeko kwaye sinethemba lokuba amaqela ethu kunye nabathengi bazakubuya ngokukhawuleza."
Abo babenomhlangano kunye nenkxaso yezobugcisa okanye kuye kwafuneka ukuba bathathe iodolo, banokwenza njalo kude kube ngu-Epreli 18. Nangona kunjalo, ukusukela ngaloo mhla awuyi kuba nakho ukuthenga e-Apple ukuba useMichigan. Kuya kufuneka siqhubeke nokuba nomonde kwaye ngaphezulu kwayo yonke intloko. Siyathemba ukuba sigqibe kungekudala kwaye sibuyele kwimo yangaphambili.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Apple kufuneka ivale iMicrosoft Apple Store kwakhona ngenxa yesifo